Amagama ayi-121 amaHusky - Khetha igama eliphelele leHusky yakho - Amagama Ezinja
Uthathe isinqumo sokuthola i-Husky yaseSiberia? Manje sekuyisikhathi sokuthola amaHusky Amagama aphelele ukufanisa isimo sabo esiphakeme, sezemidlalo nesibindi.
Ukunquma ngegama eliphelele likaHusky lohlobo oluhle kangaka akulula kepha ungakhathazeki, silapha ukuzosiza!
Uyemukelwa kumhlahlandlela wethu wokusiza ekusesheni kwakho igama elifanele lelungu lomndeni wakho onemilenze emine.
Kunezindawo eziningi ongaya kuzo ukuthola ugqozi kusuka lapho unquma ukuqamba inja yakho entsha. Ungathola ugqozi kusuka cishe noma kuphi!
Kulesi sihloko sinamagama angaphezu kuka-121 kaHusky ukukusiza uthole ugqozi futhi uqambe inja yakho igama.
Amagama AmaHusky Amahle
Amagama waseSiberia Husky
Amagama ama-Husky Abesifazane
Amagama kaHusky Owesilisa
Amagama kaHusky avela kuma-Movie
Amagama Osaziwayo Osaziwayo
Ingabe Ubuwazi: Amaqiniso we-7 Husky
Bazalelwe Ukuhlala Emakhazeni
Babeqashwa NguMbutho Wezempi
Bangangena Ngemibala Ehlukahlukene (Uboya Namehlo)
Bangakha Ikhala Eliphinki Ezinyangeni Ezibandayo
Banobuhlakani Nokho Bakhohlakele Ngokwemvelo
Ukuthola igama eliqinile, lakudala likaHusky kulula.
Zama ukubeka amagama ekubukekeni kwawo, izici ezikhethekile, kanye nobuntu (obuhle noma obubi). Nayi imibono embalwa:
Impisi - Okwakudala
UHoudini - Onamahloni ngokwemvelo, uzokwazi maduzane ukuthi lezi zinja kungenzeka abaculi abaphunyukayo
Yeti - Isidalwa seqhwa esingaqondakali
IZwi ifu lamagama we-Husky athandwa kakhulu
Ukuze uthole amagama aphelele aseSiberia Husky, ake sibuyele ezimpandeni zawo. Mhlawumbe igama elihlobene noHusky odumile, noma elinye igama le-Inuit / Alaskan. Asibone:
I-Balto - Inja edumile yase-Alaska.
Ulva - (i.e. impisi)
Indololwane - (isb Ice)
Iseshini - (isb. Iqhwa)
I-Miska - (isb Little Bear)
U-Amak - (okusho ukuthi udlala umdlalo)
Njengo - (i.e. okusheshayo)
Hachi - Hachiko ( Indaba eyiqiniso yaseJapan mayelana nesibopho semilingo phakathi kukaprofesa no-Akita odukile)
I-Koko - (i.e. Night)
Togo - Inja yesihlibhi enesibindi emhlabeni
I-Akira - (okusho ukuthi ihlakaniphile)
I-Nanuq - (isb.I-Polar Bear)
Shila - (isb.Ilangabi)
USakari - (okungukuthi Omnandi)
Atka - (okusho ukuthi iNkosi)
IKavik - (okusho iWolverine)
U-Aro noJiro - Izinja ezimbili okuyizo kuphela ezasinda ohambweni lwaseJapan oluya e-Artic ngo-1958.)
I-Kaskae - (isb.Chief)
UNanook - (i.e. Cute)
Ukhiye wokuthola igama elihle ukugxila kuzici zabo ezithandeka kakhulu.
Uma kukhulunywa ngokuthola amagama ama-Husky aphelele we-Husky yakho entsha yabesifazane; nakanjani ufuna ukucabanga ngegama elihlobene nobuhle, ukubusa nobuhlakani.
Leli yithuba elikahle lokuqamba uHusky wakho ngemuva kwesibonelo sowesifazane okukhuthaza ngempela:
I-Belle - Ubuhle nesilo
Leia - Izinkanyezi Zenkanyezi
Xena - Iqhawe Lenkosazana
I-Mulan - Disney Character (Mulan)
UHera - iNdlovukazi yama-Olympian Gods
UVenus noma uSerena - Abadlali beTennis (Isibongo - Williams)
Mika - Okusho ukuthi “Isipho Esivela KuNkulunkulu”
Laika - Husky Wokuqala Esikhaleni
UTonya - I-American figure skating legend (Isibongo - Harding)
IDesna - Igama lama-Inuit elisho ukuthi “Boss”
I-Nova - Igama lezinkanyezi elisho inkanyezi ekhanyayo
Amal - Ummeli welungelo lomuntu (Isibongo Clooney- Yebo, unkosikazi kaGeorge Clooney)
I-Astra - Inkanyezi echazayo
I-Akira - ukuhunyushwa kwesiJapane kuye 'okuhlakaniphile'
Sasha - Okusho ukuthi 'umsizi wesintu'. UHusky wakhuliswa njengenja eyisihlibhi ngakho-ke ungumsizi wesintu
U-Athena - Unkulunkulukazi WamaGrikhi Wezimpi Nobuciko
O, futhi masingakhohlwa amaHukkies ethu abesilisa. Futhi, ake sicabange ngento yamehlo neyamadoda ukufanisa ubuntu babo.
Ububi, isibindi, namandla alolu hlobo kungagcizelelwa kalula ngegama eliqinile lowesilisa. Nazi ezinye izinketho zethu:
UThor - uNkulunkulu (iGermanic Mythology) noma iMarvel Superhero
Atticus - Isazi sefilosofi sasendulo
UZeus - Inkosi Yonkulunkulu bamaGrikhi
UYuri - (Isibongo - UGagarin, umuntu wokuqala ohamba ukuya esikhaleni engena eVostok)
Stark - Ngemuva kukaTony Stark (Iron Man)
I-Ares - uNkulunkulu Wempi
ULoki (UNkulunkulu Wobubi - yena uphelele!)
UVader (Darth Vader ovela ku-Star Wars) - igama elihle likaHusky omnyama.
IHusky luhlobo olumangazayo nolwezemidlalo ngakho-ke kungokwemvelo ukuthi babezongena ezikrinini zethu ze-cinema. Noma ngabe uHusky ungumlingisi oqavile noma ukukhahlela ohlangothini, kunzima ukukugeja:
Kusukela ngo-2004, uhlobo lweHusky lunalo bekulokhu kukhula ukuthandwa .
Akumangazi-ke ukuthi nalabo saziwayo bangabangani nokubamukela . Nawa amagama ambalwa osaziwayo wokuthola ugqozi olwengeziwe:
UFloyd - Miley Cyrus
Umhubhe - uBen Stiller
I-Aurora - Ashlan Gorse
Isibhakabhaka - uJared Leto
Amabhakede - uQuincy Pondexter
UBuddy - Taylor Lautner
U-Eli - Lesley-Ann Brandt
ILuna - uLouis Smith
UDallas - UDanica Sue Patrick
USasha - uRussell Westbrook
UClark - Husky kaChad Michael Murray uphefumulelwe kusuka kumlingisi ophambili kwi-National Lampoon's Vacation (Film Series)
Baylor - Selena Gomez (Lona empeleni ukuxubana kukaHusky )
Okuhlaza okwesibhakabhaka - uLeah Remini
UKona - uNick Lachey
UWaldo Picasso - uJoe Jonas
I-Swaggy Wolfdog - u-Alex Lange
I-Vodoo - Bella Thorne
Kukhona njalo ama-Huskies amaningi adumile ku-Instagram , zizwe ukhululekile ukuyowahlola.
Uzwile wonke amagama ethu amahle we-Husky. Manje, hlala phansi bese usidedela ngalawa maqiniso ayi-7 aphezulu. Ngemuva kwalokhu uzokuqonda nakanjani ukuthi kungani lolu hlobo wonke umuntu uyahamba .
Ama-Huskies anezici ezintathu zomzimba ezikhethekile ezisiza ukuzigcina zifudumele ezindaweni ezibandayo:
Ijazi labo - Banengubo ephindwe kabili yokuzigcina zizinhle futhi zithambile, ngisho naseqhweni. Banengubo yangaphansi ethambile futhi efudumele nejazi elide elingazweli emanzini.
Amehlo abo - Amehlo abo amise okwe-alimondi aqinisekisa ukuthi bayakwazi ukucwayiza kahle ukugcina amehlo abo evikelekile eqhweni.
I-Swirl - Balala imisila yabo isongwe ngobuso babo; lokhu kuqinisekisa ukuthi bayakwazi ukuvikela amakhala abo nobuso emakhazeni.
Yize kungaba iqiniso elaziwayo ukuthi amaHuskies azalelwa ukuthi asebenze futhi ashelele izinja ngabase-Alaska, akulona iqiniso elaziwayo ukuthi basebenza eMpini Yesibili Yomhlaba. AmaHuskies asetshenziswa eMpini Yesibili Yomhlaba ukuthutha, ukuthuthwa kwempahla, kanye nezinhloso zokuxhumana kanye nezinja zokusesha nokutakula.
Ama-Husky pups angafika nezinhlobonhlobo zoboya obunemibala. Isibonelo, i-agouti, emhlophe, emnyama nomhlophe, nsundu nokumhlophe, mpunga.
Ngokwengeziwe, amehlo abo angavela anhlobonhlobo yemibala futhi. Kusuka kokuluhlaza okotshani, kuya ku-hazel, kuze kube nsundu bese-ke, intandokazi enkulu, uHusky ohloba okwesibhakabhaka.
Yaziwa nangokuthi i-hypopigmentation, lesi simo sibizwa nge- 'Snow Nose' noma 'Winter Nose'.
Lapho uHusky enalesi simo, amakhala abo abomvana noma anombala ophaphathekile phakathi nezinyanga ezipholile. Lolu shintsho lungahlala unomphela njengoba bekhula kepha ngokuvamile lubuyela kokujwayelekile uma sekusondele ihlobo.
AmaHuskies aziwa ukuthi aphakathi kwezinhlobo zama-canine ezihlakaniphe kakhulu. Kodwa-ke, banaso uhlangothi olubi nolubi lapho bengaba nenkani kakhulu futhi kwesinye isikhathi badlale kakhulu.
Ungethuki, vele ubekezele, uhlale unethemba futhi uzofika lapho!
IHusky iwuhlobo oluphawulekayo, olunenkani kodwa oluhlakaniphile, oluhle futhi olunesibindi. Idume ngokwakha okuqinile nokuqina kwezemidlalo nokuqina.
Ngempela bafanelwe igama eliyingqayizivele, noma ngabe lichazwa ubuntu babo noma ukubukeka kwabo, noma bamane baqanjwe ngegama lomuntu omthandayo, usaziwayo osaziwayo noma umlingisi webhayisikobho.
Kukhona uhla olukhulu lwamagama ongakhetha kuwo, kukuwe ukuthi ukhethe ukulingana okufanelekile.
Sithemba ukuthi lawa ma-Husky Names angama-121 azokubeka esinyathelweni esiseduze ekutholeni igama elihle lenja yakho. Sazise okuthandayo ngezansi.
Amaqiniso ayi-10 Ubungazi Nge-English Cream Golden Retriever
ukuxubana okumnyama nokumhlophe
impisi emhlophe yaseJalimane eyi-hybrid
I-chihuahua pug mix ikhule ngokugcwele
kungani inja yami iqhubeka nokuhamba komile